FALANQEYN XASAASI AH: Musharaxiinta Madaxweyne-nimada Somalia ayey kala wataan ragga maanta loolamaya. | PuntlandTimes-	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
FALANQEYN XASAASI AH: Musharaxiinta Madaxweyne-nimada Somalia ayey kala wataan ragga maanta loolamaya.
MUQDISHO(P-TIMES)- Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda ku guda jira Codeyntii koowaad oo ay ugu codeynayaan cidda noqonaysa Gudoomiyaha golaha Shacabka ee Soomaaliya, waxaana tartamaya afar musharax oo hadda fadhida iridda hore ee baarlamaanka Faderaalka.
Ragga tartamaya maanta waxay kala taabacsan yihiin musharaxiinta u loolamaya kursiga ugu sareeya dalka ee Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya.
Xogaha ay helayso Puntlandtimes.com waxay cadeynayaan in Musharax Maxamed Sh Cismaan Jawaari oo hadda ah ninka ugu cad-cad uu ka socdo dhinaca Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud.
Prof, Jawaari ayaa lagu yaqaanaa nin inta badan u soo hiiliyey Xasan Sheekh Maxamuud, gaar ahaana markii ay daaqada ka baxayeen Ra`iisulwasaarayaashii la bedelay tan iyo sanadkii 2012-dii oo ahaa labo Ra’iisulwasaare.
Ra’iisulwasaare Sharmaake oo haddana ah musharax Madaxwene-nimo, waxaa la aaminsan yahay in uu taageero xoog leh ku bixinaya Cabdifitaax Geeseey oo horey u soo noqday Wariye iyo gudoomiyaha gobalka Baay, kana mid ah wasiiradda Koonfur Galbeed.
Mr, Geeseey ayaa hadda rajadiisu ay wanaagsan tahay, waxaana suuragal ah in uu gaaro wareega u dambeeya ee doorashada, hadiiba uusan guuleysan, iyadoo ay jiraan Xildhibaano codkooda siinaya.
Saaxiibka Shariif Xasan Sheekh Aadan ee u soo sharaxay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa hadda kalsoonida uu qabo ay sii yaraanaysaa, waxaana muuqata in uu ku hari doono wareega koowaad ee doorashada ama kan labaad.
Codeynta wareega koowaad ayaa socota, waxaana meel adag maraysa xaaladda kala doorashada xubnahan oo ay baarlamaanka Soomaaliya hadda ku mashquulsan yihiin.
ISHA KU HAAY XOGTENA RIIX HALKAAN